Americans' holiday plans affected by COVID-19 | USA News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba Zokuhamba e-USA » Izicwangciso zeholide zaseMelika ezichaphazeleka yi-COVID-19
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • omnye • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ze-USA
Izicwangciso zeholide zaseMelika ezichaphazeleka yi-COVID-19
Iziphumo zophando olusandula ukwenziwa lwabantu baseMelika abangama-500 ukubona ukuba izicwangciso zabo zeholide zichaphazele njani Covid-19, zibhengezwe namhlanje.
Uphando luye lwaqokelela ukuqonda malunga nemikhwa yabathengi kunye nokuchitha inkcitho ngaphezulu kwesifo.
Ukuqonda kuvavanyo lubonisa ukuba ukubuk 'iindwendwe kunye nomzi mveliso zinokuthi zihambise iminikelo yazo ukulungiselela iimfuno zabathengi.
Ngokuqhelekileyo abantu bahlala emakhaya kwizidlo zabo zeholide kwaye abayitshintshi loo nto kulo nyaka, ngaphandle kokuba banokuba nemibutho emincinci okanye bakhetha umbhiyozo obonakalayo. Kulungiselelwe abo babambe iindibano zokuhlangana nabantu ngeli xesha leeholide, uninzi lwabo luya kuba neendwendwe ezi-6-10. Kwiivenkile zokutyela, oku kuthetha ukuba banokwenza iipivot ukuya kubuncinci besabelo sokuya kwiiholide zokutya, okanye ukubonelela nge-la-carte.
Sibuze abaphenduli ukuba babebambe indibano kunye nabantu aba-5 okanye ngaphezulu. Ngaphantsi kwesiqingatha sabaphenduli bathi ewe, kwaye kula-30% kubo basebenzise ukutya kwezi ziganeko. Ukuba abasebenzisanga ukutya, ezona zizathu zokuba yayixabisa kakhulu, babeziphekela ukutya okanye beziva ngathi akuphephile. Ukulungiselela ukutyisa ukutya ngeli xesha leholide, iivenkile zokutyela zinokubonelela ngenkuthazo yamaxabiso ukuze kutsalwe abathengi abaninzi, zibonelele ngeendlela ezinokutya-nge-la-carte kwizidlo zeholide, kwaye zityhale ngaphandle izinto zokuthengisa ezibonisa ukhuseleko lwabo xa belungiselela ukutya ukuthomalalisa amaxhala omthengi .
Ngaphezulu kwesiqingatha sabaphenduli bathenga amakhadi ezipho kwiivenkile zokutyela ngeli xesha leeholide. Ukuba kunokwenzeka, iivenkile zokutyela kunye neendawo zomnyhadala kufuneka zisete inkqubo yekhadi lesipho kwi-Intanethi ukwenza intengiselwano ilula kwaye ibe lula kubathengi.
Ngaphezulu kwesiqingatha sabaphenduli abaphendulile hayi xa bebuzwa ukuba indawo yabo yokusebenza / inkampani ibambe umbhiyozo weholide; Nangona kunjalo oko akuthethi ukuba ngekhe kwenzeke ekugqibeleni. Iindawo zokutyela kunye neendawo zomnyhadala zinokunika abathengi inkuthazo yokubhukisha imibhiyozo yasemva kweholide kwiinyanga zentwasahlobo zika-2021.